Bolivia : Fetin’ireo Alasitas · Global Voices teny Malagasy
Bolivia : Fetin'ireo Alasitas
Voadika ny 10 Janoary 2019 16:06 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Febroary 2008)
Sary an'i Cltn naverina navoaka miaraka amin'ny fahazoandàlana Creative Commons.
Ekeko dia rangahy kely iray miramirana. Angamba teraka avy amin'ireo zavatra mameno ny tànany ilay hafaliany : vola dolara sy Euro natao amin'ny endriny kely, fiara raitra, trano maro sy diplaoma eny amin'ny anjerimanontolo. Ao Bolivia, ny Ekeko dia sarivongana ampifandraisina amin'ny fahafenoana sy ny fahombiazana. Izy no mpilalao fototra rehefa fetin'ny Alasitas. Ao an-tanànan'i La Paz io hetsika io no karakaraina, saingy afaka hita ihany koa amin'ny endriny azy manokana any amin'ireo tanàna hafa ao Bolivia. Cristina Quisbert , ao amin'ny bilaogy Bolivia Indigena [espaniola] no manoritsoritra ny endrika isehoan'ilay rangahy kely ary manamarika fa niova ny endriny, lasa somary safiotra kokoa amin'izao fotoana izao.
Betsaka ireo bilaogera ao amin'ny El Alto no nitanisa ity fety nentindrazana ity. Soritan'i Juan Apaza ao amin'ny bilaogy El Alto Hoy [espaniola] ireo firavoravoana:
Ny Alasitas dia raisina ho toy ny fety iray iainana amin'ny endriny bitika (fety iray ifangaroan'ireo olona avy amin'ny sarangam-piarahamoanina samihafa), ahafahana manatratra ny “fijery ny eny ambony tsy takamaso nananan'ny Aymara”. Mahazendana ny mahita ny fanantenana sy ny tetikasan'ireo olona mividy ireny olona kely ireny: tranobe soa… ny fiara raitra nivoaka farany…maripahaizana avy amin'ny anjerimanontolo…Sakafo manana amby ampy ho an'ny tokantrano…Volabe misavovona…dolara sy euros. Amin'ny mitataovovonana, mandalo eny anoloan'ireo Yatiris ny olona (Yatiris , ireo olona-mpitsabo nentindrazana) mba ho tanteraka ny nofinofin-dry zareo (eo no miditra an-tsehatra ny resaka finoana…)…Andro miavaka izany, tena hafakely. Ny ALASITA dia avy amin'ny teny aymara ary azo adika hoe … “Vidio aho”.
Felipe Puacara avy amin'ny Tecnología Comunicacional [espaniola] no manome fanazavana misimisy kokoa momba ireo fombafomba :
“Amin'ny ora voatondro, mihazakazaka ireo tanora, ankizy ary hatramin'ny antitra mba hividy ireo ravimbola, trano, fiara, fanaka fanao an-trano, maripahaizana avy amin'ny anjerimanontolo sy ireo karazana zavatra marobe irian-dry zareo ho azo mandritry ny taona. Ny fividianana ravimbola dia tsy inona fa faniriana fotsiny ihany mba tsy ho orim-bola mandritry ny taona any anatin'ny kitapom-bolany. Ankoatra io firohotana mividy zavatra io, seriny dia seriny tokoa ny olona mitady ireo antsoina amin'ny teny Aymara hoe “YATIRIS,” izay azo adika hoe “MPAMANTATRA NY HOAVY,” mba hanononan'izy ireny ny CHALLAR (fitahiana) ho an'ireo sarivongana kely novidiana ary hanampy amin'ny famadihana ireo faniriana ho tena izy. Fomba fanao any an-tendrombohitra Andes ny Challa ary zavatra atao amin'izany ny manondraka ireny zavatra ireny aminà zavapisotro (misy alikaola na divay), avy eo rakofana setroka emboka manitra”.
Wara Yampara avy amin'ny bilaogy El Alto Productivo [espaniola] no manoritsoritra ny anjara asa mavesatry ny banky natao amin'ny endriny kely amin'ny fanatanterahana ireo faniriana natao nandritra ny Alasitas.
“Manandanja ho an'ireo te-hanangona tahiry ny banky. Misy ny banky madinika, misy ny goavana, izay mirefy hatramin'ny 50 cm ny haavony. Ankosotra vatovandana no nanamboarana ireny banky ireny ary herintaona mialoha ny Alasitas no nanaovana azy, ny volana Martsa, mba ho afaka ampiasaina ny taona manaraka. Ny fombandrazana mikasika ireny banky natao amin'ny endriny kely ireny dia ny fividianana azy mba hametrahana ao anatiny ny tahirin'ny tena. Ankizy no ankamaroan'ireo olona mividy banky, mba hampianarana azy ireo hitahiry. Ho an'ireo tranombarotra sy orinasa indray, banky manana endrika ombilahy mainty no vidiana, satria heverina ho toy ny mitondra soa izy ireny ho an'ny fandraharahàna, saingy azo atao ihany koa ny mahita talantàlana bitika, trano fivarotana, mpivarotra hena, mpanety, fivarotana kiraro, mpivaro-mandeha, fivarotana telefaona, sns…. Ho an'ny resaka fitiavana, ny fombandrazana dia ny manolotra akoholahy ho an'ny namana izay mitady vady na akohovavy ho an'ireo mpivady te-hiteraka. Raha vehivavy ilay namana, dia akoholahy no atolotra azy, mba ho sambatra izy ao anatin'ny tontolon'ny fitiavana”.
Miarahaba tena ireo bilaogera sasany nahita hoe mbola matanjaka ireny fombandrazana ireny na eo aza ny tandindona avy any ivelany. Ampahatsiahivin'i Loyola Larico ny tantara iray izay nambaran'ny raibeny azy [espaniolal].
“Notantarain'ny raibeko tamiko ny iray tamin'ireny angano ireny ary toy izao no ventiny. Ny harivan'ny 24 Janoary, nisy mpivady niaraka tamin'ny zanany lahy sy ny vinantovavin-dry zareo tratry ny loza. Mpanamboatra ireny zavatra atao amin'ny endrika bitika ireny ry zareo, izay fahita rehefa Alasitas. Saingy tratry ny loza ity zanaka lahy nefa tokony hiteraka tamin'izany andro izany indrindra ilay vadiny. Noho ny antony isankarazany, tsy afaka namita ara-potoana ny kaomandy iray tamin'ireo sary zavatra bitika ireo ry zareo. Indray alina àry, nisy lahiantitra bolangina antsoina hoe Pancho nandondona tao am-baravaran-dry zareo. Nanontany azy ireo izy raha mba afaka miantrano ao indray alina. Malala-tànana amin'ny hafa mandrakariva io fianakaviana io ka dia namela ilay lahiantitra hatory tao amin-dry zareo. Nandritra ny resadresaka, nolazain-dry zareo ny asany sy ny olana atrehan-dry zareo. Nitondra fanampiana ho azy ireo ilay vahiny. Rehefa teraka ilay vinantovavy, efa vitan'i Oancho daholo ireo kaomandy tokony ho natao ho an'ny Alasitas. Rehefa tafaverina an-trano ireto fianakaviana, taitra mafy tokoa ary dia nanamafy ny finoan-dry zareo ny Alasitas izany..Tena misy tokoa i Ekeko, ary izy no tonga nitsidika azy ireo”.
Hamehezana azy, mizara tenim-pahendrena vitsivitsy izy, avy amin'ny raibeny, momba ireo fombandrazana ao an-tanànan'i El Alto [espaniola]:
“Manohana antsika ny fombandrazantsika ary manome hery ho antsika mba hiroso hatrany. Raha amin'ny fomba fijery ara-kolontsaina, tsy tokony mihitsy isika hanadino ny fombandrazana sy ny fanaontsika. Araka izay fitenin'ny raibeko mandrakariva hoe ‘raha hainao izay niavianao, hainao ny làlan-kizoranao”.